ZCTU Inoti Iri Kutsigira Hurongwa HweMDC Hwekuramwa Mabasa
Kubvumbi 16, 2008
Bato reMDC rinoti kurudziro yaro yekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nekusaziviswa kwezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika, yakanzwikwa zvikuru kunyange hapo pane mashoko ekuti hazvina kufamba sezvaifungidzirwa.
Bato iri rinoti kutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu munyika chimwe chezvingangoita kuti vamwe vanhu vaende kumabasa. Mashoko atiri kutambira anoti zvinhu munyika zviri kungoratidzika semazuva ose, sezvo vanhu vari kungoita mabasa avo semazuva ose.
Mutauriri weMDC VaNelson Chamisa vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti vacharamba vachikurudzira vbanhu kuti vasaenda kumabasa kusvika zvavari kuda zvaziviswa.
Zvichakadaro, sangano reZCTU rinotsi riri kutsigira hurongwa hwekuramwa mabasa hwakadaidzirwa neMDC inotungamirirwa naVaTsvangairai.
Mutungamiri weZCTU VaLovemore Matombo vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti vashandi ndivo vazhinji vevanhu vakavhota musarudzo, saka vanodawo kwazvo kuziva zvavakavhotera.
Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mumazuva mairi apfuura vanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vasungwa. vasungwa ava vanosanganisira Director veInformation Va Luke Tamborinyoka, Director veResearch Va Fortune Gwaze, mutori wenhau akazvimirira oga Frank Chikoore, vakasarudza kumirira MDC mudare reparamende ku St Marys, Va Marvellous Khumalo.
Kumatare edzimhosva, dare ramagistrates neChitatu rakapa mutongo wekuti vatori venhau vekuAmerica neBritain havana mhosva yekutyora mutemo weAIPPA.
Gweta revaviri ava, Amai Beatrice Mtetwa vati hurumende yashaiwa humbowo hwakakwana hwekuratidza kuti vatori venhau ava, vanosanganisira Barry Bearak neumwe asina kudomwa nezita wekuBritain, vakatyora mutemo panguva yesarudzo dzemwedzi wapfuura.